China US Standard Commercial LED Exit Sign Lighting Manufacture and Factory | Saselux
UL Wepụ ihe ịrịba ama
Akara ngosi CB
Akara Ọpụpụ SAA
CSA/CUL Wepụ ihe ịrịba ama
TUV/COC Wepụ ihe ịrịba ama
UL Ìhè Mberede
Ọkụ Mberede CE
Ìhè mberede SAA
UAE COC/TUV Mberede Mberede
Ọkwọ ụgbọ ala mberede
Nchọpụta anwụrụ ọkụ
Mgbanwe ihe mmetụta
Igwe nchacha ikuku
Igwe nhicha ikuku guzoro
Ihe na -ehicha ikuku
Ụlọ ihe nchacha
Ụlọ ihe eji esi nri
Ìhè Nchebe ụgbọ mmiri
Sochie Ìhè Mberede
Onye na -emepụta mmanụ dizel
Ikanam Ikanam Light
Obere ụgbọ ala ikuku purifier
Wearable Air Purifier Olu Olu Freshener N'olu
Europe nabatara Ezi Style LED Exit Sign na Europe
N'uko ma ọ bụ nghọta arịọnụ Fire ụzọ ọpụpụ ịrịba ama Popular m ...
Edepụtara EC Ihe ịrịba ama ọpụpụ mberede
Ihe ịrịba ama ọpụpụ ọpụpụ kacha ewu ewu na Australia
Ezigbo ogo 10kva Single Generator Silent Silent Generator
Portable Desktop Air purifier Sterilizer For Kids, B ...
Ọkụ Mpụga Ọpụpụ Mpụga ọkụ na -ewu ewu na America
Akara Ọpụpụ Ọkụ kacha mma na North America
IP65 Civil Defense kwadoro ọkụ ọkụ mberede LED
Abụọ na -agbanwe agbanwe isi isi ọpụpụ Ọpụpụ ngwakọta
UL Emergency LED Exit Lighting Combo
Ikanam ndabere batrị ndabere LED
Mgbapụta Mgbapụta Mberede ọkụ ọkụ na -akwụ ụgwọ
UL & CUL depụtara Light Emergency LED
Ọkwọ ụgbọ ala mberede LED na -adịgide awa 3
Ngwongwo ihe ọinụ Tableụ nke ihe eji esi nri na tebụl
US Standard Commercial LED LED Emergency Exit Sign Lighting
Ụlọ na-akpụzi thermoplastic ABS ụlọ
UL-94V-0 ọkwa ire ọkụ, na-eguzogide ọkụ
Voltage ntinye: 120/277V
Ike oriri: 4W max.
Mmepụta: 1W max.
1.2V Batrị Nickel Cadmium
Oge nkwụ ụgwọ: 24 awa
Oge mwepu: 90 nkeji
Ọnọdụ ọrụ: 0 ° C ~ 40 ° C
Nkọwa zuru ezu
① [UL gbaara ezi àmà] A na-enyocha nkeji ọkụ ihe nrịba ama ihe mberede chọrọ ka UL924 na CAN/CSA-C22.2 No.141, onye na-agbanyụ ọkụ, ụlọ na-akpụzi thermoplastic injection, Standard for Lighting Emergency, Power and Unit Equipment.
② [Ntinye dị Mfe] Otu akụkụ ma ọ bụ okpukpu abụọ, Nrigo elu ụwa niile: Ndọta akụkụ, ịrị elu ụlọ na mgbidi site na kanopi butere ọkụ ọpụpụ mberede. Ọkụ nrịba ama ọpụpụ ihe mberede dabara adaba maka ọnọdụ ime ụlọ, mana ọ bụghị mmiri mmiri na ọnọdụ akọrọ. Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ bụ 0-40 Celsius.
③ [Na -adịgide adịgide] Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -enwu enwu na -eduga n'ịkwado akara ọpụpụ maka ihe karịrị awa 50,000 nke ndụ na -ahụ anya site na ihe ruru 100 ụkwụ. Ìhè SMD LED na-adịte aka nwere ngbanwe ule na ọkụ ngosi ọkụ.
④ [Ike ọkọnọ siri ike] Batrị nkwado nickel cadmium na -enye ihe karịrị 90mins n'oge ọkụ kwụsịrị. Oge ịkwụ ụgwọ ya bụ awa 24. Batrị nwere ike dochie anya nke ejiri ọkụ nrịba ama ọpụpụ mberede nwere ike chajịa AC 120/277V karịa ugboro 300.
⑤ [Ensured Quality & Service] Ngwa a bụ nke ụlọ na-akpụzi thermoplastic ABS. N'ihi ya, ọ na-eguzogide ọkụ. A ga -enyocha akụkụ ọ bụla nke akara ọpụpụ mberede tupu ebuga gị. Anyị na-enye ngwaahịa dị elu na ọnụ ahịa dị ọnụ ala nke akwụkwọ ikike afọ 5 kwadoro na nkwado ndị ahịa mgbe ahịa gachara. Anyị na -enye gị ọrụ OEM. Anyị nwere ike hazie nchịkọta na akara. Enwere ụgwọ ọzọ maka nke a. Mana ọ bụrụ na ọnụ ahịa ahịa gị buru oke ibu, nke a bụ n'efu.
Nke gara aga: Igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ azụmaahịa UL/CUL
Osote: UL Emergency LED Exit Lighting Combo
Ihe nrịba ọpụpụ ọpụpụ ojii nwere ọkụ ọkụ
Azụmahịa Mgbapụta Ọpụpụ Mberede Ọpụpụ
Mgbapụta Ọpụpụ Mberede Abụọ
Mgbapụta Ọpụpụ Mberede Ọkụ
Mgbapụta Mgbapụta Ọkụ Mberede
Mgbapụta Ọpụpụ Mgbapụta Mberede
Mgbapụta Ọpụpụ Mgbasa Ozi Mbupụ
Mgbapụta Mgbapụta Ọpụpụ Mgbapụta Mberede
Ihe ịrịba ama ọpụpụ mberede
Ihe nrịba ọpụpụ uhie na -acha ọbara ọbara nwere ọkụ mberede
Akwụkwọ Ozi Red Ọkụ Mpụga Mberede
Ul depụtara ọkụ mberede/ọpụpụ ọkụ
Ọstrelia Standard LED Sign Exit Sign
N'uko ma ọ bụ nghọta arịọnụ Fire ụzọ ọpụpụ ịrịba ama Popu ...
Copyright - 2021: Ikike niile echekwabara.
Kpọtụrụ (Alaka Shenzhen Marketing)
No.9038, Yikang, Huarong Road, Dalang, District Longhua, Shenzhen, China
7 ụbọchị n'izu site na 10:00 ụtụtụ ruo 6:00 mgbede
Kụrụ banye ịchọ ma ọ bụ ESC imechi